Yemahara VPN: Kuongorora kwesarudzo dzinokutendera iwe kuti uwane imwe | Linux Vakapindwa muropa
Yemahara VPN: Kuongorora kwesarudzo dzinokutendera kuti uve nazvo
Una VPN kana Virtual Yakavanzika Network sevhisi inobvumidza iwe kuvhurira mamwe maInternet masevhisi ayo anotenderwa zvinoenderana nenzvimbo yako, senge mamwe mavhidhiyo ekushambadzira, kana mamwe maapplication asingakwanise kutorwa kubva kune anoshandisa zvitoro mune dzimwe nyika. Iyo zvakare inopa yakawedzera chengetedzo ne encrypting network traffic, ichipa yakawanda kuvanzika uye kusazivikanwa kana iwe uchitarisa.
Para zvimwe zvakawanda nezveVPN, unogona kuverenga chinyorwa chedu nezve akabhadharwa zvakanakisa VPN masevhisi. Mariri iwe unowana zvese zvaunoda kuti uzive, kubva pakunaka kwayo, kune maitiro aunogona kusarudza yakanakisa imwe. Muchikamu chino chitsva tichazotarisa chete pane iwo emahara. Sezvo vazhinji vashandisi vasingawanzo kushandisa zvakanyanya sevhisi uye vanosarudza kuyedza imwe yemahara ...
Usavhiringidze VPN ne VPS, zvinhu zviviri zvakasiyana zvachose.
Kana iwe uri kufunga kuyedza mabhenefiti eVPN asi kutanga uchida kuongorora kana zvichishandira izvo zvauri kutsvaga kana kuti kwete, uye kunyangwe kana uchizoishandisa zvakanyanya pano neapo, ipapo iwe ungangodaro unofarira kuziva zvavari . yemahara VPN masevhisi most recommended. Nekudaro, nekukurumidza kana kumberi, kana iwe ukaishandisa zvakanyanya zvakanyanya, zvinokubhadhara iwe kubhadhara sevhisi, nekuti ivo vanopa zvirinani mabhenefiti uye hazvina kudhura zvakanyanya.
7 Opera VPN
Con Hotspot Shield unogona kuva nebasa remahara. Ivo zvakare vane yakabhadharwa sevhisi, asi kana iwe uchida kuyedza iwe unogona kushandisa yemahara kurodha pasi yavanayo pane yavo webhusaiti. Dambudziko nderekuti rinongowanikwa chete paWindows, zvisinei, kana ukashandisa mamwe masisitimu anoshanda neFirefox web browser, unogona zvakare kushandisa yako plugin yeiyi browser, kunyangwe zvichizogumirwa chete mukushandisa kweakataura browser, kufumura traffic kubva kune chero chimwe chirongwa chakabatana ...
Pakati pake akatanhamara maficha Iwo ndeeye yeyo server memory, sezvo iine 2500. Dzinogarwa munzvimbo dzinopfuura makumi manomwe dzakasiyana, uye inotsigira anokwana mashanu emidziyo yakabatana panguva imwe chete. Encryption yaro yakanaka kwazvo, kuti ipe kumwe kuchengetedzeka kune ako maratidziro. Pane kudaro, kumhanya kwako kunogona kuvandudzwa neimwe nzira.
Imwe tsananguro yekuchengeta mundangariro ndeyekuti kuve wakasununguka, kunogumira kune traffic ye500 MB chete yedata pazuvandiko kuti, anenge 15 GB pamwedzi. Ichi hachisi chinhu chikuru, kunyanya kana iwe uchichiida kune bandwidth-ine nzara mashandisiro sekutepfenyura vhidhiyo kana kurodha kwakakura.
Tarisa izvo zvinopihwa izvo izvozvi mukati Hotspot Shield
Surfshark nderimwe remasevhisi ane akanakisa maonero paInternet. Iyo VPN yakachengeteka kwazvo, inokurumidza uye inoshanda neNetflix-senge vhidhiyo masystem. Kunyangwe isiri yemahara, zvinokwanisika kuti uwane nemutengo unonzwisisika. Iyo inouya yakashongedzerwa nesarudzo zhinji dzekuchengetedza saka mupfungwa iyoyo unogona kunzwa wakachengeteka kwazvo.
Sezvatakatotaura, hunhu hwayo unblocking services seNetflix kana P2P faira kugovana uye download torrent ndiyo imwe yenzvimbo dzinokosheswa muVPN iyi.
Kana iwe uchida kuyedza iyi VPN unogona kurodha yemahara vhezheni kubva kunotevera chinongedzo.
Tarisa uone zvirongwa uye kutengesa kwe Surfshark
TunnelBear ndeimwe yemasevhisi emahara aunowana kuti uzviwanire iwe wakasununguka yemahara VPN. Iyo ine ma1000 maseva mune ino kesi, yakagoverwa mune dzinopfuura makumi maviri nyika. Uye zvakare, muganho wemidziyo yakabatana kubva kune imwechete IP iri zvakare mashanu, senge mune yakapfuura kesi.
Chinhu chakanaka nezve TunnelBear ndechekuti inounza kuwedzera kudekara, kuve wakapusa kwazvo kudzivirira chako. Iine vatengi vezvigadzirwa zvemafoni uye zvekare zvePC, nerutsigiro rweMicrosoft Windows, macOS, Android uye iOS mapuratifomu. Uye zvakare, ine zviwedzero zveanonyanya kufarira mabhurawuza ewebhu, zvakare yeLinux, senge Firefox, Chrome, uye Opera.
Dambudziko nderekuti kuve wakasununguka, kune zvausingakwanise munzira. Izvi inogumira kune 500MB chete pamwedzi, ipfupi zvakanyanya kune vazhinji vashandisi. Kana iwe uchizvifarira uye uchida kuvhura iyo muganho, iwe unogona kusarudza kune ayo maviri ekubhadhara mitengo.
Inopa chengetedzo yakanaka kwazvo. Icho chakashandurwa kuita chakakomba sevhisi, kunyanya mushure mekuwanikwa kwayo nehofori yeiyo McAfee chengetedzo. Uye zvakare, ivo vachangobva kuchinja mutemo wavo wekutora data kubva kune vatengi vavo. Iye zvino ivo havachengete yakawanda data sepakutanga, iyo inopa zvakanyanya kusazivikanwa.
Imwe yezvikanganiso zvayo ndeyekuti haina nhamba yakakura yesarudzo uye magadzirirwo, saka zvakare zvakareruka kushandisa kune vashandisi vasina ruzivo. Nekudaro, vashandisi vemberi vanokwanisa kuzviwana ivo pachavo vachimanikidzwa kuita zvavanoda chaizvo.
Iwe unoda kuyedza TunnelBear? Tarisa mavara avo pawebhusaiti ye TunnelBear
Kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti, unogona kutarisa izvozvo WindScribe Iri ibasa rine sarudzo mbiri dzekubhadhara, asi zvakare imwe yemahara. Unogona kusarudza pakati pemahara kana kunyoreswa, zvinoenderana nezvinodiwa. Chero zvazvingaitika, iri yakanaka VPN yemahara, ine chengetedzo yakanaka kwazvo uye nerupo rwezvinhu zvisina basa.
Iyo ine anopfuura makumi mana emaseva pane iyo sisitimu yakavakirwa, iri mune dzinopfuura nyika makumi matanhatu. Chinhu chakanaka ndechekuti haina muganho wemidziyo yakabatana panguva imwe chete. Izvo zvinogona kuve mukana pane izvo zvakapfuura kana iwe ukashandisa huwandu hukuru hwezvigadzirwa pamba, zvakadai semapiritsi, mafoni, maPC, nezvimwe, zvakabatana panguva imwe chete.
Zvinowanikwa inowanikwa yeMacOS, Windows, Linux uye iOS, uye nekuwedzeredzwa kwemabhurawuza ewebhu Firefox, uye Chrome. Zvimwe zvakanaka mhedzisiro yayo yakakwira muganhu wedhata pamwedzi, iine kusvika pa10GB, pasina kuita ganhuriro yezuva nezuva sezvinoita zvimwe zvekare. Naizvozvo, iwe unogona kushandisa kusvika kune iyo nhamba pakupera kwemwedzi, zvisinei kuti chii chaunodya pazuva. Zvakare, kana iwe ukawedzera muyenzi iwe unogona kuwedzera imwezve 1GB, uye kunyange kutunda + 5GB.
Nemaseva mazana maviri akapararira pamusoro penyika dzinopfuura makumi mashanu, imwe yemasevhisi ane maficha akanaka uye emahara iri Kurumidza. Kumhanya kwayo kwakanakira semahara sevhisi, asi inongotsigira yakakwira yeimwechete yakabatana mudziyo panguva imwe chete.
Inowanikwa MacOS, Linux, Windows, iOS uye Android, ichikubvumidza iwe kurodha pasi mutengi maapplication eayo ese masisitimu. Kubva panguva yekutanga iwe uchaona tekinoroji yayo kuti ikurumidze kubatana, ine kuchengetedzeka kwakasimba uye kushandiswa kuri nyore.
Pakati pekukanganisa kwayo ndeyekusabvumidza kushandiswa kweNetflix, uyezve muganho wedata pamwedzi sezvo riri remahara sevhisi. Panyaya yeSpeedify ndizvo 5GB pamwedzi, icho hachisi chinhu chikuru kune vashandisi vazhinji. Zvikasadaro, zvakakodzera kuedza ...
De ProtonVPN Ini ndanga ndataura nezve yakabhadharwa VPNs mune chinyorwa. Iyo ndeimwe yeakanakisa masevhisi mune zvese. Uye chinhu chakanaka ndechekuti ivo vanorega iwe uedze iro simba uye chengetedzo zvachose mahara.
Mubasa rayo remahara, ProtonVPN inobvumira kubatana kumwe chete, kumhanya kwakanaka (avhareji uchienzaniswa neakabhadharwa), kuchengetedzeka kwemauto emauto, nemaseva chete munyika nhatu sezvo iri seyakaganhurirwa sevhisi, hapana muganho wedata, Pasina kushambadzira uye zvakanakisa pane zvese, hapana dhata rekodhi revashandisi, saka icharemekedza zvakavanzika zvako zvakanyanya.
Uye zvakare, iine app ye Windows, MacOS, Linux, iOS uye Android, ine yayo yemuno mutengi app yeaya mapuratifomu uye nekwanisi yekuishandisa nenzira yakapusa. Iwe unogona kusimudzira kune kunyoreswa kunyoreswa kana uchida.
Izvozvi pane zvinopihwa kana iwe uchihaya ProtonVPN kubva pane iyi link yatichangobva kukusiya.
Vanozivikanwa Opera webhu bhurawuza zvakare yako wega mahara VPN sevhisi. Nekudaro, sevhisi iyi inosanganisirwa chete mubrowser yako, uye haina kunyorera kana kuchengetedza chero traffic kunze kwekunge kuburikidza nebrowser. Kunyangwe izvo, inogona kuve yakanaka sarudzo pasina kubhadhara uye kuchengeteka.
Iyi sevhisi haina muganho, saka hakuzovi nemitemo yemigwagwa. Izvo zvakare hazvizivikanwe, pasina kudikanwa kwekunyoreswa kuti uvandudze kodzero yako yekuvanzika. Iwe unongofanirwa kushandisa iyo VPN mashandiro ayo uye ichaita seye proxy server yebrowser traffic.
Ehe saizvozvo nyore chaizvo kushandisaIwe unongofanirwa kuimisikidza kubva kuOpera browser interface uye inotanga kushanda ipapo ipapo Kana iwe usiri kuida, unogona kuidzima nekungobaya bhatani pane on / off bhatani ...
Rimwe basa remahara raunogona kuwana ndere Speedify mune yako Starter Chirongwa. Basa remahara riine kukwana kwe2GB pamwedzi. Uye zvakare, zvinongobvumidza chinhu chimwe chete kuti chibatanidzwe panguva imwe chete. Ehezve, ine yakajeka robhodhi yekuchengetedzeka uye yekushambadzira modhi.
Mukuwedzera, iyo inokosha ine mazana maviri emaseva yakagoverwa munyika dzinopfuura makumi mashanu, uye vatengi veLinux, Android, iOS, Windows, uye macOS nekutenda kune vatengi vayo app yaunogona kurodha pasi.
Kana iwe uchironga kuishandisa neNetflix, kunyangwe iyo kutenderera nzira, chokwadi ndechekuti haishande nemazvo sezvo riri remahara sevhisi. Nemamwe masevhisi anogona kushanda nemazvo.
Imwe yemahara VPN isina miganho iri Betternet, ine kumhanyisa kwakanaka uye pasina kurambidzwa kwedata. Iwe unogona kuiisa pane yako Windows, Android, macOS inoshanda sisitimu, uye zvakare paFirefox uye Chrome webhu mabhurawuza nekuda kwekuwedzera kwayo.
Chinhu chakanaka ndechekuti haidi kunyoreswa, saka ichadzivirira nhanho iyoyo uye nekupa ruzivo rwekubhadhara, nezvimwe. Zvakare ane Premium kunyorera kana iwe uchida uye uchida chimwe chinhu kupfuura yako base service.
Imwe yemahara maVPN ekupa iri UrbanVPN. Sevhisi yakagadzirirwa kukwidziridzwa kwakanaka kwekumhanyisa kumhanya, iine risingaperi bandwidth, uye nhamba hombe yemaseva ari munyika makumi maviri nesere dzakasiyana.
Pamusoro pekupa basa risina miganhu, sePrimiyamu services inoitira mahara, unogona kubatana neIP kubva chero kupi zvako pasi. Ehezve, funga kuti kana vasina chavanobhadharisa chero chinhu, ivo vanofanirwa kuwana purofiti kubva kune chimwe chinhu, uye kana chimwe chinhu chiri chemahara uye chisiri chemahara kana chakavhurika sosi sosi, saka chigadzirwa chinowanzo kuve iwe. Ndokunge, ivo vanobatsirwa kubva kune imwe dhata yaunopa.
Ivo zvakare vanovimbisa kuti ndizvo zvakavanzika uye zvakachengetekaSezvo ichichengetedza traffic ine encryption, ine DNS leak kudzivirira, uye yako chaiyo IP ichachengetedzwa zvakare. Nezvo iwe unokwanisa kuwana chero peji rewebhu, kunyangwe kana riine zvinorambidza kwenzvimbo yako.
Uye zvakare, ine plugins yeEdge, Firefox, uye Chrome mabhurawuza. Nzira iri nyore yekusimudza yako VPN uye uchimhanya paunenge uchitsvaga. Kunyangwe kana uchida kuti ndiite maapplication ese system iri pasi pekudzivirirwa kwayo, uye kwete bhurawuza chete, saka unofanirwa kubata mamwe emacomputer maapplication ayo ane yeApple, Windows, macOS uye iOS
Tarisa izvo zvinopihwa izvo izvozvi mukati UrbanVPN
Rimwe basa, senge rapfuura, harisi iro rinozivikanwa kwazvo. Asi inounza VPN network dzakasununguka zvachose, mukuwedzera pakuve nyore kwazvo kushandisa nekuda kwemapulagi ayo eChannel uye Firefox webhu mabhurawuza, pamwe necustomer maapplication eWindows, macOS, Android, iOS uyezve yako GNU / Linux distro.
Uye zvakare, ivo vanoona kuti inomhanya kwazvo nekuda kwemazana emaseva akapararira kumusoro kusvika 50 nyika dzakasiyana, pamwe nekuchengetedzwa kwakachengetedzeka kuitira kuti network yako traffic ichengetedzwe. Ehezve, ichavharawo IP yako kuti ufambe nehukuru hwakavanzika uye nekuwana masevhisi akadziviswa mune yako geo-zone.
Kunyangwe kuve 100% yemahara, haritenderi huwandu hwetraffic iyo iwe yaunogona kushandisa zuva rega rega kana mwedzi wega wega. Chinhu chinokosheswa, nekuti mamwe masevhisi mazhinji emahara ane zvirambidzo zvakakomba zvinopedzisira zvaita kuti mushandisi apererwe.
Tarisa izvo zvinopihwa izvo izvozvi mukati dewvpn
Hide.me ndeimwe yeakanakisa emahara VPN masevhisi. Iyo yakanyatsogadzirirwa kuchengetedza hunhu hwako paunotarisa, nemaseva mazana mazana mana ari munyika makumi mashanu nemashanu. Yako mudziyo muganho panguva ndeye 1400. Uyezve, haizoratidze yambiro kana kumhanyisa kumhanya kwako, zvichikubvumidza iwe kuti uchengetedze yakanaka yekumhanyisa micheto chero nguva.
Mubasa ravo remahara vanongobvumidza nzvimbo nhatu pakati pekugadziriswa kwavo, ne muganho we2GB pamwedzi wega wega. Izvo hazvisi zvekunyora kumba nezvazvo, asi kana iwe uchida kuvhura zvimwe zvinogona kuita iwe unogona kubhadhara kunyorera kuti uwane sevhisi iri nani.
Inowanikwa natively ye Windows, MacOS, Android uye iOS. Ivo vane 24/7 technical technical, kana iwe uine matambudziko. Kana iwe uchida iyo yeLinux unofanirwa kushanda zvishoma, kuti uiise sezvavanokuzivisa iwe kubva kune yayo web.
Haisi basa remahara rinowanikwa muCanada, pachinzvimbo, SurfEasy ine plugin yeOpera browser yechero inoshanda system inotsigira ino webhu bhurawuza. Naizvozvo, yakati rebei, pamusoro pekupa mabhenefiti asiri anobva kune imwe nyika. Zvisinei, inogona kunge iri sarudzo yakanaka kune vamwe vateveri veiyo browser.
Iyo ine maseva 1000 munyika makumi maviri neshanu, uye ine rutsigiro rwezvigadzirwa zvishanu panguva imwe chete. Iyo ine inoshamisira-inoshamwaridzika interface, ine hunhu mashandiro, asi yayo muganho i500MB pamwedzi.
Iyo imwe yemahara VPN yaunogona kuwana yeWindows, Linux, uye nhare mbozha. YakavanzikaTunnel inokutendera iwe kushandisa maseva ayo munzvimbo 9 dzakasiyana uye anokwana matatu emidziyo akabatana panguva imwe chete. Kushandiswa kwaro kuri nyore kwazvo nekuda kwehukama hwayo hushamwari.
Zvimwe zvinhu zvisina kunaka, kunze kwemuganhu, ndezvekuti iyo kuita kunogona kunge kusingaenderane dzimwe nguva. Zvisinei, izvi zvinogona kunge zvakanaka kana iwe waedza zvese zvataurwa pamusoro apa uye usina kugutsikana nechikonzero chero chipi kana kana ukashandisa maVPN akati wandei kunzvenga muganho wakatemerwa nevasununguka uye nekudaro uchivhara zvaunoda zvepamwedzi usingabhadhare yuro imwe chete. ..
Iye zvino unogona kusarudza yakanakisa yemahara kana yakabhadharwa VPN mushure meizvi zviviri zvinyorwa zvinotsanangura zvese zvakavanzika. Ndinovimba ndakubatsira, unoziva kuti unogona kubva makomendi ako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Yemahara VPN: Kuongorora kwesarudzo dzinokutendera kuti uve nazvo
PhpStorm, yakanakisa IDE yekuyambuka-chikuva PHP